China Jumbo Bhegi FIBC Mucheka Kucheka Muchina CSJ-2200 fekitori uye vagadziri | VYT
FIBC Mucheka Kucheka Muchina
FIBC Belt Kucheka Muchina
FIBC Kuchenesa Muchina
Ultrasonic Kucheka Muchina
Bottle Rakaumbwa Liner Kuiswa chisimbiso Machine
Mudziyo Liner Bag
PP rakarukwa bhegi kugadzira muchina
Otomatiki Jumbo Bhegi Cleani ...
Jumbo Bhegi FIBC Mucheka Cutti ...
Jumbo Bhegi Bhandi rakarukwa FIBC ...
Jumbo Bhegi FIBC Mucheka Kucheka Muchina CSJ-2200
Muchina unogadzirirwa unobatanidza akasiyana akakosha mashandiro mujumbo bhegi kucheka-kubaya senge: Auto. Jumbo jira roll roll, Edge maitiro ekudzora (EPC), Kureba-kuverenga, Kubaya unit ye ​​"O" gomba, Kubaya unit ye ​​"X" gomba, Circle ichitsanangura, Linear-banga kucheka, Jumbo-jira kudyisa.
Isu tanga tichiita mukugadzira, kupa, uye kutumira kunze kweFIBC Kucheka neSpout Kucheka Muchina. Iyo yakapihwa machira yekucheka muchina inorema uye yakasimba muchina masisitimu, anoshandiswa pakucheka kwakaringana kwezvinhu. Yedu yakapihwa yekucheka muchina ndeye microprocessor-based system, iyo inopihwa ine yakawanda-ficha control panel. Muchina wakapihwa wekucheka unoponesa nzvimbo uye manpower kushandiswa.
Yedu CSJ- 1400, CSJ- 2200 uye CSJ-2400 michina yakavimbika uye inoshanda yakagadzirirwa kuburitsa mapaneru eFIBC (Jumbo Mabhegi) ehurefu hwakatemwa kare pamwe nemikana yekuchekwa kweprofile kunoenderana nezvinodiwa nemutengi.
Iyo komputa yekudzora system ye otomatiki jira yekucheka muchina wejumbo mabhegi inotora iyo yepamberi AC servo yekudzora tekinoroji kutyaira mota yekugadzira, ine hunhu hwehombe torque, yakakwira kushanda, kumhanya kumhanya kudzikama uye pasi ruzha. Dhizaini yekushanda kwepaneru yakapesana, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvinoenderana nevatengi vakasiyana. Sisitimu iyi inotora chiChinese dhizaini dhizaini, iri nyore kuisa nekugadzirisa
1. PLC yepakati kudzora system. Ruvara murume-muchina interface, iyo inogadzira zuva-dhizaini, kuratidza, kurekodha zvakajeka uye zvakajeka, Easier mashandiro.
2. Hydraulic otomatiki jumbo-jira mupumburu kudyisa & EPC unit, yakagadzikana, yakapusa uye yakapusa mukushanda.
3. Yakashongedzerwa kupinza servo control system yekucheka chaiko uye nekukurumidza.
4. Yakashongedzerwa neakakwira mhando chiwanikwa chesimbi holistic cutter, iyo iine zvakanakira senge isiri-inokanganisa yakanaka kupisa kuchengetedza, uye Nguva refu yekushandisa-hupenyu.
1 Muenzaniso CSJ-2200
2 Max kucheka upamhi 2200mm kana yakagadzirirwa
3 Kucheka kureba 50150mm
4 Kucheka kunyatsoita ± 1-10cm
5 Mucheka kudyisa kumhanya 45m / min
6 Gadzira chinzvimbo 10-20 pc / min （kureba 1600mm）
7 Kukura kwe "O" gomba ＜ 600mm
8 Kukura kwe "+" gomba ＜ 600mm
9 Kudzora kwekushisa 0-400 madhigirii
10 Injini simba 10KW
11 Voltage 380V 3phase 50Hz
12 Yakamanikidzwa mweya 6Kg / cm²
1) CSJ-2200 jumbo bhegi yekucheka muchina uye zvakasanganiswa michina yekucheka hombe denderedzwa chikamu;
2) Iine otomatiki kutsauka kururamisa basa, iyo kutsauka kururamisa chinhambwe chiri 300 mm;
3) Iine otomatiki jira kudyisa basa (pneumatic);
4) Chikamu cheCSJ-2200 mudziyo wekucheka bhegi muchina wakagadzirwa nedenderedzwa diki kana muchinjikwa akachekwa denderedzwa kudhirowa;
5) Iyo yekuyambuka chinzvimbo ine basa rekuchengetedza chengetedzo grating;
6) Ine basa rekucheka denderedzwa hombe.
Inoshandiswa kune yakasarudzika jumbo bhegi jira kucheka senge, Jumbo bhegi yakagadzika-yakati sandara / yakapetwa kaviri jira, Jumbo bhegi rimwe-rira jira, Jumbo Bhegi repasi chivharo, pamusoro pevhavha, yepamusoro muromo jira.
Nemuchina uyu wakagadzirwa zvakanaka, compact machine, unogona kuisa polypropylene machira zvidimbu uye saizi inodiwa yegomba remuromo. Kureba uye maburi ekucheka zvigadzirwa zvinogona zvakare kushandiswa zvakasiyana.
Asati atanga maitiro, anoshanda anofanirwa kuisa saizi chaiyo yekucheka gomba. Nzvimbo chaiyo yegomba inofanira kugadziriswa. Iyo centering yeiyo holing unit inoitwa nemupendero control unit. Mushure mekumisikidza yakatemwa yakatemwa kureba, mashandiro anomhanya otomatiki kusvikira asvika pakurongwa huwandu.
Iwe ungangoda kugadzirisa iyo nguva, iyo nguva yekucheka maitiro uye kupisa kwekupisa zvinoenderana nehukuru hwejira. Kuisira kunoitwa nemaoko. An otomatiki stacking unit inowanikwa sarudzo.
Xuzhou VYT Machinery uye Technology Co., Ltd.inoitirwa kugadzira nekugadzira ese akanangana neFIBC michina, yakanyatsogadzirirwa uye kugadzirirwa yeFIBC inobatsira uye neshure yekupedzisa michina.
Isu tave tichigadzira michina yekugadzirwa kweFIBC kwemakore mazhinji, VYT muchina uri kupa masevhisi kune ayo vatengi, kuitira zvirinani kushambadzira mhinduro. Nhasi, vatengi vazhinji mune dzinopfuura nyika dze30 kwese kwese wold vanogutsikana nehunhu uye kuvimbika kwezvigadzirwa zvedu nemasevhisi.
Tinotenda VYT ichave iri nani uye iri nani, kudiwa kwevatengi ndiyo yedu isingagumi injini yekuvandudza, rutsigiro rwevatengi uye kusimbiswa ipeturu yedu kuti ive nani!
Isu tinoitawo michina zvinoenderana nechikumbiro chevatengi, senge:
1.FIBC-1350 otomatiki Mucheka Kucheka Muchina
2. FIBC-2200 otomatiki Mucheka Kucheka Muchina
3. FIBC-6/8 otomatiki Webbing Kucheka Muchina
4. FIBC-PE Bhodhoro Rakagadzika Liner Machine
5. FK-NDJ-1 Square Rakaumbwa Liner Machine
6. YK-NDJ-2 Round Rakaumbwa Liner Machine
7. QJJ-Mushini Wokuchenesa
8. CSB-28K Ultrasonic Kucheka Muchina
Pashure: Jumbo Bhegi Bhandi kurongedza FIBC hombe bhegi chiuno Kutema Muchina FIBC-6/8
Zvadaro: Ultrasonic Kucheka Kuisa Mucherechedzo Muchina unoshandiswa pane yakatenderera Ruvara
Auto Mucheka Kucheka Muchina KweJumbo Mabhegi Makuru Mabhegi
Yakachipa Auto Fibc Jumbo Bhegi Big Bhegi Kucheka Muchina
Fibc Auto Chichatara Kucheka Uye Kupeta Muchina
Fibc Spout Kucheka Muchina
Jumbo bhegi muromo jira rinotenderera muchina
Manual FIBC Mucheka Kucheka Muchina weCross
Jumbo Bhegi Fibc Bhegi Yakazara-Otomatiki Kupisa Kucheka ...
Auto FIBC jira kucheka muchina wejumbo bhegi ...
1-1, South chirimwa, Zhangji Industrial Park, Tongshan District, Xuzhou City